द ब्लोब शपमा बल्क क्यान्डी किन्नुहोस् र eBay वा Amazon बेच्नुहोस् - एक मीठा डील - साम्प्रदायिक समाचार: अनलाइन व्यापार, थोक र B2B बजार समाचार
सम्पादकको पिक जनवरी 21, 2021 जनवरी 21, 2021 थोक र B2B समीक्षा अर्जेन्टिना थोक र B2B, एशिया थोक र B2B, B2B, बंगलादेश थोक र B2B, बेल्जियम थोक र B2B, ब्लग, बेलायत थोक र B2B, बुल्गारिया थोक र B2B, व्यापार, क्यानाडा थोक र B2B, चीन थोक र B2B, चेकोस्लोवाकिया थोक र B2B, डेनमार्क थोक र B2B, DR कांगो थोक र B2B, सम्पादकको पिक, इजिप्ट थोक - B2B, फ्रान्स थोक - B2B, जर्मनी थोक र B2B, ग्लोबल थोक अनलाइन, ग्लोबल विश्व, ग्रीस थोक र B2B, ह Hongक Kong थोक र B2B, हंगेरी थोक र B2B, भारत थोक र B2B, इन्डोनेशिया थोक र B2B, इटाली पसल थोक र B2B, जापान थोक र B2B, केन्या शप ग्लोबल, मेक्सिको थोक र B2B, नाइजेरिया थोक - B2B, अनलाइन थोक र B2B, अनलाइन थोक र B2B बजार, पाकिस्तान थोक र B2B, फिलिपिन्स थोक र B2B, रूस थोक र B2B, B2B अनलाइन खरीद गर्नुहोस्, ग्लोब किन्नुहोस्, थोक अनलाइन खरीद गर्नुहोस्, दक्षिण अफ्रीका थोक - B2B, दक्षिण कोरिया थोक र B2B, स्पेन थोक र B2B, थाईल्याण्ड थोक र B2B, टर्की थोक र B2B, युक्रेन थोक र B2B, थोक, थोक - B2B, थोक र B2B बजार, थोक बजार अनलाइन खरीद र बिक्री
त्यहाँ अवश्य पनि, अन्य मेगा साइटहरू छन् इन्टरनेटमा, जसमा सबैलाई सस्तोमा बेच्ने योजनाहरू समावेश गरिएको छ, A देखि Z सम्म। त्यसोभए, द ग्लोब शपले कसरी अमेजनको बिरूद्ध मापन गर्छ? प्रयोग गर्दै बल्क क्यान्डी एक उदाहरण को रूप मा, तपाईं हाम्रो साइट मा केहि मिठो सौदा पाउनुहुनेछ।
द ग्लोब शपमा, Mus मस्केटीर बारहरूको-36-गणना बक्सहरू । २१.21.99 को लागि उपलब्ध छन्, र Kit Kats को समान बक्सहरू । २२.22.99। को लागी। द ग्लोब पनि छ रिजको बदाम बटर कपको बक्सहरू १ $ .19.99। को लागि। हर्षेको बारेमा के छ? ग्लोब प्रदान गर्दछ -36-गणना बक्सहरू $ २१.21.99 को लागि पनि।
हो, क्यान्डीदेखि क्लेनेक्ससम्म कोटिहरूमा नाम ब्रांडका उत्पादनहरूमा नयाँ र आश्चर्यजनक सम्झौताहरू आउन जारी छ। प्राय: शप द ग्लोबमा अधिकको लागि फेरि हेर्नुहोस्।
अब हामी ती समान वस्तुहरू अमेजनमा के जान्छौं हेरौं। क्यान्डी पनि मिठो छ, तर मूल्यहरू तीतो गोली हो।
त्यो समान बक्स किट Kats अमेजन$ मा। 23.99 मा बेच्छ ग्लोब शपमा भन्दा बक्स १ प्रति बक्स। यो रिजको बदाम बटर कपको बक्स २$.२२— को लागि उपलब्ध छ द ग्लोब शपमा भन्दा २%% बढी। उही हर्सेको बारहरूको बक्स Amazon— मा .33.89 .XNUMX$..XNUMX for को लागि सूचीबद्ध छ ग्लोब शपमा भन्दा %२% बढी। अन्तमा,-36-गणना बक्स Mus मस्केटर्स बारहरू $ 34.94— को लागि बेच्छग्लोबको मूल्य भन्दा% 45% बढी।
ग्लोबको नाम ब्रान्ड उत्पादनहरू प्रदान गर्ने जस्तो मोड यस्तै कम मूल्यहरूमा खरीद गर्नुहोस्। हामीले महँगो र अनावश्यक बिचौलिया हटाएका छौं, र हाम्रा विक्रेताहरूलाई हाम्रो वेबसाइटमा समाचार प्रकाशनहरू र लिस्टिंगहरू पोष्ट गर्न अनुमति दिइरहेका छन्, जेब लागतको अगाडि। बदलामा, द ग्लोब शपले विक्रेताहरूलाई केवल उनीहरूले बेचनेको मात्र १२% चार्ज गर्दछ।
हामी सञ्चालन गर्दछौं १०० भन्दा बढी प्रमुख भाषाहरू, र प्रस्ताव मुद्राको एक विस्तृत विविधता, तपाईं प्रत्येक हुन सक्ने भाषा, तपाईं प्रत्येकले बुझ्ने भाषामा सामान र पूँजीको सजिलो प्रवाह सुनिश्चित गर्दै। प्रत्येक अधिक को बाटो मा छन्।
पसल ग्लोब एक स्थापित समाचार कम्पनीको स्वामित्वमा छ, र साथै हाम्रो तेस्रो साइट हो फ्रीलान्स ग्लोबल गिग, र अभिभावक साइट, सांप्रदायिक समाचार। सबै तीन साइटहरूले द्रुत बृद्धि प्रदर्शन गरीरहेका छन् र उनीहरूलाई ग्लोबल प्लेटफार्मको रूपमा स्थापित गर्दछ जुन हाम्रा विक्रेताहरूलाई कुनै वा कम मूल्यमा हुँदैन।
सांप्रदायिक समाचारले उद्योगहरू र बजारहरू, उत्पादनहरू र सेवाहरू मार्फत अप-टु-डेट रिपोर्टहरू र पूर्वानुमान प्रदान गर्दछ। हामी पाठकहरूलाई दैनिक समाचार, व्यवसाय, खेलकुद, र शीर्षकहरूको विस्तृत श्रृंखलामा विश्लेषण प्रदान गर्दछौं।
बल्क क्यान्डी थोक अनलाइन खरीद गर्नुहोस् सांप्रदायिक समाचार Herseys किट Kats Musketeers पट्टा ग्लोब किन्नुहोस्